Rindrambaiko Iray Vaovao Manampy Ny Jamba “Hahita” Ny Fanakòna-Masoandro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Aogositra 2017 17:00 GMT
Vakio amin'ny teny हिन्दी, Ελληνικά, Español, 日本語, Français, عربي, русский, 繁體中文, 简体中文, ਪੰਜਾਬੀ, Italiano, English
Ny modely voalohan'ilay “rumble map”-n'ny fampiharana. Sary : Carolyn Beeler/PRI
Tany amin'ny PRI.org, tamin'ny 11 Aogositra no niseho voalohany ity lahatsoratra nosoratan'i Carolyn Beeler ity. Navoaka eto indray izy ity ho ampahany amin'ny fiarahana miasa amin'ny PRI sy ny Global Voices.
Toy ny fanombohanà ankamantatra izy ity. Ahoana ary no mety “hahitan'ny” jamba ny fanakòna-masoandro any Etazonia amin'ny 21 Aogositra ho avy izao ?
Fanontaniana iray nanomboka nampieritreritra ilay astrofizisiana mpandinika ny masoandro, Henry “Trae” Winter izany, volana maro taorian'ny niangavian'ilay jamba mpiara-miasa aminy azy mba hanoritsoritra ny toetry ny fanakòna-masoandro.
“Tsy hitako izay natao,” hoy i Winter . “Tsy azoko an-tsaina mihitsy hoe ahoana no fomba hampitàna amin'ny olona iray izay tsy nahita mihitsy nandritra ny androm-piainany ny zava-miseho mandritra ny fanakòna-masoandro.”
Tsaroan'i Winter ny tantara notantarainà namana iray taminy momba ny mety ho fanombohan'ny fanenon'ny valala antoandro benanahary rehefa hanakona ny masoandro ny volana mandritra ny fanakòna-masoandro. Dia notantariny tamin'ilay mpiara-miasa aminy io tantara io.
“Nahery ny fihetsiny, ary tiako haverina amina olona maro manerana ny firenena araka izay azoko atao izany fahagagana sy fahatalanjonana izany” hoy i Winter.
Noho izany, dia nanapaka hevitra i Winter izay miasa ao amin'ny Foiben'ny astrôfizika Harvard-Smithsonian, any Cambridge, Massachusetts, hamorona fampiharana mba hanao izany fotsiny : mamela ny jamba hiaina ny fanakòna-masoandro amin'ity fahavaratra ity.
Ireo fihetsik'ilay astrôfizisiana mpandinika ny masoandro “Trae” Winter manatona ny rindrin'ilay lahatsary mampiseho ny sarin'ny masoandro ao amin'ny Foiben'ny Astrôfizika Harvard-smithsonian any Cambridge, Massachusetts. Sary : Carolyn Beeler/PRI
“Matetika no voahilika amin'ny haikintana (astronomia) sy ny astrôfizika ilay vondrom-piarahamonina [pahina], ” hoy i Winter ” ary heveriko fa fahadisoana goavana izany ka fotoana hanitsiana azy izao.”
Ny 10 Aogositra, Fanakòna-masoandro ravahana feo, natao ho an'ny iPad sy ny iPhone, mitantara ara-potoana ireo endrika isankarazany amin'ny fanakòna-masoandro araka ny toerana ara-jeografia misy ilay olona mpampiasa.
” Karatra marokoroko sy mihovitrovitra” no ahafahan'ireo mpampiasa mandre sy mahatsapa ny zava-miseho rehefa mitsapa ilay sarin'ny fanakòna-masoandro teo aloha ry zareo.
Mangina ny faritra matroka amin'ny sary, tahaka ny vongam-bolana mainty, rehefa tsapaina, ireo tàna-masoandro malefaka mivoaka avy any ambadiky ny volana no mihovitrovitra malefaka. Onja matetika sady mafy kokoa no ateraky ny fitsapàna ny faritra mamiratra kokoa, tahaka ny tara-pahazavana manivatsiva ilay lavaka amin'ny volana.
Mifandray ny hovitrovitra sy ny feo. Malefaka ho an'ny faritra matroka kokoa ary mafy kokoa ho an'ny faritra mazava kokoa.
“Nahavita namorona onja izay misy akony amin'ny vatan'ny finday izahay” hoy i Miles Gordon, injenieran'ny feon'ilay rindrambaiko , ” noho izany, mihovitrovitra ny finday manontolo amin'ny fampiasany ny fanamafisam-peony.”
Modely iray voalohany ho an'ireo fitaovana ho avy
“ Tsy ny hampiainana ny jamba na olona pahana ny zavatra hiainan'ny mahita no tanjon'ity rindrambaiko ity” hoy i Winter. ” Ny fanantenako dia dingana voalohany, modely voalohany ity, izay hahafahana mianatra mba hanamboarana ny fitaovana manaraka”
Misy fitaovana hafa izay ahafahan'ny jamba miaina ny traikefan'ny fanakòna-masoandro, toy ny sarintany azo tsapain-tànana sy ny boky, saingy heverina ho toy ny tranga hita maso ireny.
Ny zavatra tsy dia fantatra mazava dia ny fiovàovàn'ny toetrandro sy ny hafanàna, ary ny fihetsiky ny biby miaraka amin'ny fanakòna-masoandro tanteraka.
Rehefa nampahafantarina ilay fampiharana, tsy nino i Chancey Fleet, ilay namana voalohany niangavy an'i Winter mba hanoritsoritra ny fanakòna-masoandro nandritra ny fivoriana volana vitsy lasa izay.
“Nihomehy irery aho tamin'ny nandrenesako voalohany hoe angatahana ny jamba mba hanongilan-tsofina amin'ny fanakòna-masoandro, ary nezahiko nafenina izany fihetsika manafintohina izany”, hoy i Fleet, mpampianatra teknolojia ampifanarahana amin'ny zava-misy (adaptée) ao amin'ny tranomboky iray ao New York. “Tahàka ny vazivazy izany.”
Wanda Diaz Merced, namadika ny angon-dàlan'ny hazavana ho feo ho an'ny fikarohany momba ny fipoahan'ny ‘rayon gamma’. Niasa tamin'ny rindrankajy sy ny fidirana amin'ny rindrambaikon'ny Eclipse Soundscapes izy. Sary: Carolyn Beeler/PRI
Fa taorian'ny nahafantarana ny momba ilay feo ampiarahana amin'ny fanakòna-masoandro, dia te-hanandrana ny ridrambaikon'i Winter izy.
“Te-hanandrana irery an'izany aho, fa tsy mifaly fotsiny amin'ny fandrenesana na famakiana ny momba azy” hoy i Fleet. “Tsy misy ny voafaritra raha tsy hitan'ny maso. Ary manaporofo izany indray [ity] “.
Notohanan'i Wanda Diaz Merced, jamba, astrôfizisiana ny ekipa mpandrindra ilay rindrambaiko, mba hahazoana antoka ny fanamoràna ny rindrankajin'ilay fampiharana.
Mihoatra lavitra noho ny haizina mampalahelo amin'ny mitatao vovonana ny fanakòna-masoandro, izany no finoany fa hasehon'ilay rindrambaiko amin'ny olona.
“Ho hitan'ny olona fa azo renesina sy tsapaina ihany koa [ ilay zava-misy] “, hoy i Diaz Merced.
Tiany raha fitaovana hahazoana mitarika ireo tanora jamba ho liana kokoa amin'ny siansa ihany koa io rindrambaiko io.
“Tena zavatra faran'izay manandanja izany “, hoy izy.
Mba hirakitra ireo feo sy fihetsiky ny olona sy ny biby mandritra ny fanakòna-soandro,nampiditra mpahay siansa avy amin'ny National Park Service, avy ao amin'ny Oniversiten'i Brigham Young ny ekipan'ny Eclipse Soundscapes, izay vatsian'ny kitapom-bolan'ny NASA.
Ny dingana faharoa amin'ny tetikasa dia fanamboarana angondrakitra azo tsidihana malalaka amin'ireo rakitra ireo, amin'izay mba mora ho an'ny jamba ny mampiasa azy. Izany no endriky ny tetikasa izay tena mahafaly an'i Diaz Merced amin'ny lafiny siantifika.
Taorian'ny tsy nahitany intsony tamin'ny faramparan'ny taona 2000, dia voatery izy namboatra rindrankajy manokana ho an'ny solosainy mba hamadihana ireo angondrakitra avy amin'ny teleskaopy (masolavitra fijerena ny habakabaka) ho rakipeo mba hahafahany manohy ny fikarohany ( inty ny lahateniny tao amin'ilay fivoriana TED ).
Antenainy fa hitondra tombontsoa bebe kokoa io tetikasa io amin'ny fahazoan'ireo mpikaroka toa azy mitsidika ireo angona ireo.
“Ny fanantenako dia ny mba hampiasàn'ny angondrakitry ny ao amin'ny siansa [io] lasitranà angondrakitra [io]… mba hahafahantsika mitsidika malalaka ilay torohay,” hoy i Diaz Merced. ” Ary angamba [noho ilay angondrakitra], tsy ho lasibatry ny fanavakavahana intsony isika”.
Noho izany, antenainy fa ho lasa lavitra ankoatry ny indray andro ny fiantraikan'ity fanakòna-masoandro ity.